XOG:- Madaxweyne Farmaajo oo xilka ka qaadi doona taliyeyaal ciidan (Yaa Kamid Ah) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Madaxweyne Farmaajo oo xilka ka qaadi doona taliyeyaal ciidan (Yaa Kamid Ah)
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo oo hadda ku maqan safar dalka Kenya ah ayaa la filayaa markii uu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho in xilka uu ka qaado taliyeyaal ciidan.
Farmaajo ayaa xilka ka qaadaya taliyeyaasha kala ah Militeriga, Booliiska iyo sidoo kale Nabad sugidda, kuwaasi oo la diyaariyey saraakiishii lagu bedali lahaa.
Qof ku dhow xafiiska madaxweynaha, islamarkaana naga codsaday inaan magaciisa la baahin ayaa warbaahinta Bulshoweyn u sheegay, in madaxweynaha uu doonayey inta aanu bixin in xilkaasi uu ka xayuubiyo saraakiishan, balse aysan u suurtagelin.
Waxaa diyaarsan wareegtada lagu magacaabayo taliyeyaasha cusub, walow aaney inoo suuragelin inaan helno magacyadooda, balse waxaynu wadnaa dedaal badan oo aan kusoo bandhigi doonno.
Farmaajo ayaa markii uu la wareegay talada dalka waxa uu durba isbedal deg-deg ah ku sameeyay hoggaankii Villa Soomaaliya, waxaana la filayaa sidoo kale inuu bedalo hoggaanka dhammaan hay’adaha dowladda Soomaaliya.
Madaxda Soomaalida ayaa looga bartay markii ay talada dalka la wareegaan in durba ay isbedal ku sameeyaan dhammaan xafiisyada dowladda iyo meelaha muhiimka ah, waxaana dhacda in dad badan xilalka laga qaado kuwo kalena loo dhiibo xilal cusub.